Tombontsoa sy ny fatiantoka ny fametrahana mazava tsara miray volo fantsona - Kuanyu Stainless Steel Co., Ltd.
Home » Tombontsoa sy ny fatiantoka ny fametrahana mazava tsara miray volo fantsona
Tombontsoa sy ny fatiantoka ny fametrahana mazava tsara miray volo fantsona
Noho ny tinady ho an'ny famokarana sy ny fampihenana ny ny vola lany amin'ny famokarana sy ny orinasa mpamokatra entana, mpanjifa maro no niova avy tany am-boalohany ny hatsiaka-voatsoaka miray volo sodina fividianana vy ny fametrahana mazava tsara miray volo vy sodina. Andeha hojerentsika ny tombontsoa sy ny fatiantoka ny fametrahana mazava tsara miray volo fantsona vy:
tombony: 1. Fametrahana mazava tsara ny hafainganam-pandeha namorona sodina miray volo dia fifadian-kanina sy ny famokarana output dia avo. Raha tsy misy manimba ny coating, maro samihafa ny cross-fizarana fomba azo atao mba hifanaraka amin'ny fepetra takiana ao amin'ny fepetra. 2. Ny dingana nanakodia mangatsiaka dia afaka manao ny fametrahana mazava tsara be vy sodina mamoaka tensile deformation, izay Manatsara ny vokatry ny fametrahana mazava tsara ny fotoana vy sodina. 3, ny fametrahana mazava tsara ny fametrahana mazava tsara sodina vy dia avo, ka ny mpampiasa mampihena ny taranaka ny fako.
fatiantoka: 1. Residual adin-tsaina misy eo amin'ny fizarana ny fametrahana mazava tsara miray volo sodina, izay misy fiantraikany ao an-toerana ny ankapobeny sy ny toetra mampiavaka ny fametrahana mazava tsara miforitra miray volo vy sodina; 2. Ny maimaim-poana torsional Henjana ny fizarana ny fametrahana mazava tsara vy sodina dia somary ambany; 3. Ny fametrahana mazava tsara mangatsiaka-nanakodia miray volo vy sodina Ny hatevin'ny rindrina forming dia kely, ary ny fahafahana mitondra enta-mavesatra eo an-toerana dia mifantoka amin'y ampy.